म्याक्सवेल शतकबाट चुके ! | Hamro Khelkud
म्याक्सवेल शतकबाट चुके !
एजेन्सी – ग्लेन म्याक्सवेलले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेपछि चौथो ओडीआई खेलमा अष्ट्रेलियाले पाकिस्तानलाई २ सय ७८ रनको लक्ष्य दिएको छ ।
दुबई क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ थालेको अष्ट्रेलियाले निर्धारित ५० ओभरमा ७ विकेटको क्षतिमा २ सय ७७ रन बनायो । शतक बनाउन मात्र २ रनले चुकेका ग्लेन म्याक्सवेलले ८२ बलमा ९ चौका र ३ छक्का प्रहार गर्दै ९८ रनको महत्वपूर्ण योगदान दिए । म्याक्सवेल ४९.२ ओभरमा रन आउट हुन पुग्दा शतक बनाउन चुके ।
त्यसअघि म्याक्सवेललाई ४६.२ ओभरमा उस्मान सनवारीले ७६ रन बनाएको अवस्थामा बोल्ड आउट गरेपनि उक्त बल नो भएपछि जीवन दान पाएका थिए । म्याक्सवेलले छैटौं विकेटका लागि एलेक्स केरीसँग १ सय ३४ रनको शतकीय साझेदारी गर्दै अष्ट्रेलियालाई बलियो योगफलसम्म पुर्याएका थिए । केरीले ६७ बलमा ३ चौका प्रहार गर्दै ५५ रनमा आउट भए ।
त्यस्तै उस्मान खवाजाले ७८ बलमा ६ चौका प्रहार गर्दै ६२, कप्तान आरोन फिन्च ३९, शन मार्श ५ र पिटर हेन्डस्कम्ब ७ रनमा आउट भए । पाकिस्तानका लागि ईमाद वासिम,मोहम्मद हसन र यासिर शाहले समान २-२ विकेट लिए । पाँच ओडीआई सिरिजमा अन्तरगत यसअघिका तीनै खेलमा जित निकाल्दै अष्ट्रेलियाले सिरिज दुई खेल अघि नै जितिसकेको छ ।